सुशील पौडेल - कान्तिपुर समाचार
चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा राष्ट्रप्रमुखबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम हेलत्वमा पर्दै आएको छ ।
विदेशी अवार्डलाई ४४ करोड !
इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्डस्को २० औं संस्करण अगस्ट अन्तिममा काठमाडौंमा हुने भएको छ । यसका लागि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने गरी एक उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।
सुशील पौडेलका लेखहरु :
के छ सूत्र विपिन ?
छड्के’ को विन्दु, ‘तान्डव’ को जँड्याहा ड्राइभर, ‘सुन्तली’ को टापटिपे चोर, ‘कालोपोथी’ को जँड्याहाका चरित्र ती फिल्मका लागि अति सामान्य हुन्  । तर त्यसमा विपिन कार्कीको अभिनयले चटनीझैं ट्वाक्क पारिदियो  ।
ड्याड, यो लभर ब्वाई मात्रै भएर कति फिल्म खेल्ने ? वाक्कै लागिसक्यो  । अलि केही फरक गरौं न  ।
‘रेसम फिलिली’ मा हरियाको भूमिकामार्फत चर्चामा आएका थिए कामेश्वर चौरासिया । पलाँस, अमेरिका ब्वाइज, साढे सात, राज्जारानी, गरूड पुराणमा पनि अभिनय गरेका उनी अचेल गुजारा चलाउन पनि संघर्षरत छन् ।
नेपाली फिल्ममा महिलालाई पारिश्रमिकमा मात्रै नभई भूमिकामा पनि सशक्त विरलै देखाइन्छ । प्राय: शो पिसमै हिरोइनहरुलाई प्रयोग गरिन्छ । अहिले हिरोहरुलाई ५० लाख रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिन थालिँदा हिरोइनले आफ्नो पारिश्रमिक बल्लतल्ल १५ लाखसम्म पुर्‍याउन सकेका छन् ।